Shamwari yangu yakanaka Chris Baggott aigara achigadzira muenzaniso weAirlines kana zvasvika pakupa zvakanangwa kune vateereri. Ndege dzinoziva kero yedu yekumba, yendege yendege, mafambiro edu… asi ivo vanotitumira maspecials enzendo kuenda / kubva kune mamwe maguta kunze kwekufamba kwedu, nezvimwewo zvinosekesa… pane kutipa ruzivo rwatiri kutsvaga, ivo vanotiparadzanisa isu uyezve isu hatitomboverenga maemail avanotumira
Pakudzvanya kuburikidza, ini ndakaona kuti veAmerica vakaita basa rakakura pane izvi. Iyi yekubatanidza yekudzvanya kuburikidza yaive ne 'kiyi' iyo yainyatso kuudza saiti inogamuchira kuti ini ndaive ani. Nekudaro, pandakagadzirisa zvandinoda (-kudzvanya-kamwe, zvakapusa, kupenya), mhedzisiro yacho yaikurumidza. Ini ndaisafanirwa kuisa mune yekuwedzera ruzivo ivo vatova navo uye havana kuyedza kuwedzera-pane yekunze kushambadzira kana kushambadzira kwezvimwe zvigadzirwa nemasevhisi.